Dulmarka guud/dib u eegista wadashaqaynta ee adiga kugu saabsan waxay kaalin ka geysanaysa sidii aan sare ugu qaadi lahayn Qalabaynta iyo Is-waafajinta [Rusta och matcha]
Markii aad ka qaybgalayso Qalabaynta iyo Is-waafajinta [Rusta och matcha], waxaa markaas ka tirsan tahay Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt].
Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt] waxaa lagu maalgeliyaa hantida guud. Sida loo sugo in hantida sii fiican loo maareeyay awgeed, maamulka Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt] wuxuu uruursha xagta ka qaybgaleyaasha, iyo warbixin ku saabsan heerka ay ugu guulaysteen dadkii mashruuca ka qaybgalay. Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt] iyoXafiiska Shaqada awgood ayaa waxaa la helay aqoon dheeraad oo ku saabsan Qalabaynta iyo Is-waafajinta [Rusta och matcha], taasoo iyadana suuraggelin doonto in mustaqbalka shaqo-dooneyaasha la siiyo fursad heer sare ah oo xiriir la leh adeegyada Qalabaynta iyo Is-waafajinta [Rusta och matcha].
Maxaan sameeyn karaa?
Bil kasta wuxuu adeeg-bixiyeha adiga ku qaabilsan soo bandhigayaa, dhaqdhaqaaqyadii wadajir u hirgeliseen hab waafaqsan qorshihii wadajir ugu heshiiseen. ad ku heshiiseen xogta ay sax tahay. Wargelinta Dulmarka guud/dib u eegista wadashaqaynta, waxaad bil kasta ka aqrisan kartaa [Mina sidor]. Waxaad indha-indhayn doontaaa oona oggolaanshadaada ku muujin doonta gundhigga wadashaqaynta, oo ah inaad ku heshiiseen xogta ay sax tahay.
Gundhigga wadashaqaynta ma lagu beddeli doonaa tan caadiga ah?
Maya, sida lagu siiyo gunnada, waa in Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapport] mar kasta buuxisa oo aad bil kasta soo dirta.
Maxaa dhici doono kaddib markii aan oggolaado gundhigga wadashaqaynta?
Haddii aad oggolaato gundhigga wadashaqaynta, macnaha heshiiska xogta ee adiga iyo adeeg-bixiyeha om xogta, oona wargeliso in xajinta sirta xirfadda la ciribtiro, waxaa xogta loo gudbinayaa Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt] iyo Hay'adda tirkoobka (SCB). Warbixin dheeraad oo ku saabsan oggolaanshada waxaad ka aqrisan kartaa [Mina sidor].
Maxaa dhici doono haddii aan aqbalin xogta adeeg-bixiyeha?
Waxaad aqbali karta ama diidi karta inaad aqbasho dhaqdhaqaaqa bisha oo dhan ee ku xusan gundhigga wadashaqaynta. Adeegga wakhtiga xaadirka ma suurtagelinayo, in xog gooni ahaan looga faalloodo, taasoo adiga aad kala heshiin adeeg-bixiyeha ku qaabilsan. Ka soo qaad tusaale, in hawl aad muddo aan dhammayn hal sac qabatay, xaaladdaas waxaa lagu diiwan gelinaya inaad hawshaas aad hal sac ku qabatay.
Maxaa dhici doono haddii aan wax jawaab ah soo dirin?
Gundhigga wadashaqaynta waa ikhtiyaari. Haddii aadan ka soo jawaabin saamayn kuma yeelan doonto qaadashada gunnad, in Xafiiska Shaqada aad ka diiwan gashan tahay ama wadashaqaynta adiga iyo adeeg-bixiyeha idinka dhaxayso. Laakin waa arrin aad muhim u ah Xafiiska Shaqada sii wadista horumarinta adeegyada Is-waafajinta. Sidaas awgeed, fadlan ka soo jawaab haddii xogta ku qoran gundhigga wadashaqaynta ay sax tahay iyo in kale.
Taariikhda wada shaqeyntu ma saameyneysaa lacagaha qandaraasluhu ka helo Xafiiska shaqada?
Natiijada taariikhda wada shaqeynta - hawlqabadka iyo saacaduhu - waa warcelin keliya, oo u dhaxaysa Xafiiska shaqada iyo sanduuqa arrimaha bulshada ee Midowga Yurub. Taariikhda wada shaqeyntu wax xiriir ah lama laha natiijada lacagaha uu qandaraasluhu kahelyo Xafiiska shaqada.
Haddii su'aallo kale aad ka qabto gundhigga wadashaqaynta anaga nala soo xiriir. Haddiise su’aallaha ay ku saabsan yihiin dhaqdhaqaaq gaar ah xaaladdaas kala xiriir adeeg-bixiyeha ku qaabilsan.
Warbixin dheeraad ku saabsan Mashruuca hanti bulshodeedka Yurub [ESF-projekt] iyo ka qaybgelistaada
Warbixin ku saabsan diiwaanka ka qaybgaleyaasha 201029 (esf.se)
Ku saabsan Golaha-ESF (esf.se)
Diyaar-gareyn iyo shaqana la raadin (Rusta och matcha) waxaa wax ka maalgeliya Midowga Yurub/sanduuqa arrimaha bulshada ee Midowga Yurub.